डेमिडोभ र कोरोलेभ, रूसी अन्वेषकहरू टोम रब स्मिथ र विलियम र्यान। | वर्तमान साहित्य
डेमिडोभ र कोरोलेभ, रूसी अन्वेषकहरू टोम रब स्मिथ र विलियम र्यान।
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | लेखकहरू, किताबहरु, कालो उपन्यास
अब हो। अब शरद isतु छ। हावा चल्दैछ, तापक्रम अन्ततः खस्कियो र थोरै पानी खस्यो। हामीसँग हिउँ र बरफको कमी छ, तर तिनीहरू आउनेछन् र म आशा गर्दछु कि तिनीहरू पूरै बर्षमा रहन्छन्। हामीहरू जो कम्बलको मुनि खुशी छौ, स्कार्फ र तातो कफीको साथ, जारी छ चिसोका देवताहरूलाई पुकार्दै। यस बीच हामी यो कल्पना गर्नका लागि राम्रा ठाउँहरू पनि खोज्छौं। र यस भन्दा राम्रो अरू कोही छैन क्रिसमस अपराध र अन्वेषकहरूको बर्फीले रूस जो उनीहरूलाई कौशलता र धेरै षड्यन्त्रले समाधान गर्छन्।
यसबाहेक, हामी १ 1917 १। क्रान्तिको शताब्दीको बीचमा छौं तर गुप्तचर एजेन्टको साथ लियो डेमिडोभ र मस्को फौजदारी अनुसन्धान डिभिजनका कप्तान, अलेक्सी कोरोलेभ, हामी केहि समय पछि जाँदैछौं: s० र s० दशक।यसका सिर्जनाकर्ताहरू, लेखकहरू टम रब स्मिथ र विलियम र्यानतिनीहरूलाई थाहा थियो कि कसरी राजनीतिक षडयंत्रहरू, धारावाहिक हत्यारहरू र चिसो, धेरै चिसो बीच सर्ने।
1 टम रोब स्मिथ
1.1 लियो डेमिडोभ
2 विलियम र्यान
2.1 अलेक्सी कोरोलेभ
टम रोब स्मिथ
टम रोब स्मिथ (१ 1979))) जन्म र लन्डनमा हुर्किएको थियो र छोरा हो स्विडेनी आमा र अंग्रेजी बुबा। उनले क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट अंग्रेजी साहित्यमा बी.ए. धन्यवाद एक हार्पर छात्रवृत्ति उहाँ इटालीको पाविया जानुभयो क्रिएटिभ लेखन अध्ययन गर्न। फर्केपछि उनले टेलिभिजन शृ .्खलाका लिपि लेखकको रूपमा काम गर्न थाले।
२००। थियो उनको पहिलो उपन्यास र स्मिथ त्यो बर्षको सफलता लेखक मानिन्थ्यो। उसले जित्याे इयन फ्लेमिंग स्टील डगर सर्वश्रेष्ठ थ्रिलरको लागि अपराध लेखक संघ द्वारा सम्मानित। स्मिथ रूसी सिरियल किलर एन्ड्रेइ चिकाटिलोको जीवनबाट प्रेरित भएको थियो, जसले s० र between ० को बीचमा people२ व्यक्तिको हत्या गर्‍यो, जसमध्ये धेरैजसो बच्चाहरू थिए।
यो स्टालिनवादी रूसमा सेट गरिएको छ 1953। कसरी वर्णन गर्दछ लियो स्टेपानोविच डेमिडोभ, सोवियत खुफियामा कार्यरत एक युद्ध नायक, अनुसन्धान गर्नु पर्छ हत्याको श्रृंखला। यसले उसलाई उसको गाह्रो बाल्यावस्थाको ईन्गमास बारे सोधपुछ गर्न पनि अग्रसर गर्दछ। यद्यपि सुरुमा उनी अन्धाधुन्ध भएर प्रणालीको आधिकारिक प्रचारमा विश्वास गर्दछन्, जब उसलाई आफ्नै पत्नीको जासूसी गर्न भनिएको छ राजद्रोहको आरोपमा, डेमिडोभ निराश छन्।
Su nonconformityआफ्नो सजावट र शानदार सेवा रेकर्डको बाबजुद, उनलाई डिमोडेट गरियो र मस्कोबाट निकालियो। एक औद्योगिक शहर को मिलिशियामा समावेश, त्यो केहि मामला मा आउँछ अधिकारीहरूको द्वारा बच्चाहरूको हत्या संदिग्ध रूपमा बन्द गरियो। डेमिडोभ आफैंमा रहस्य सुल्झाउने प्रयास गर्नेछ।
उनको चलचित्रमा लैजाने अधिकार द्वारा अधिग्रहण गरिएको थियो रिडली स्कट र भित्र 2015 स्विडेनी निर्देशक डानियल एस्पिनोसा यसको अनुकूलन निर्देशित। तिनीहरूले यसमा तारांकित गरे टम हार्डी र नूमी र्यापेस र ऊसँग ग्यारी ओल्डम्यान वा चार्ल्स डान्स जस्ता फेन्सी माध्यमिक थियो।
२००। बाट। हामी भित्र छौं 1956। डेमिडोभ मस्कोमा फर्केका छन् र आफ्नी श्रीमती रइसा र उनीहरूले अपनाएका छोरीहरू जोया र एलेनासँग बस्छन्। तर उसको विगत र उसको पुरानो क्यारियरको विरासत - जस्तै साथी र परिवारलाई राज्य सुरक्षा अधिकारीका रूपमा उनी हिरासतमा लिएका थिए - उनलाई पछाडि बढिरहेछन्। A हत्याको नयाँ श्रृंखला यसले त्यो कमजोर स्थिरता तोड्न सक्ने खतरा छ। अरु के छ त, उनको छोरी जोयाको जीवनलाई जोखिममा पार्नेछ.
यो श्रृंखलाको अन्तिम शीर्षक हो र २०११ मा प्रकाशित भयो, तर यो अ english्ग्रेजीमा मात्र हो। यो पहिले नै को अवधिमा विकसित गर्दछ शीत युद्ध। रईसा र उनका दुई छोरीहरू कूटनीतिक अभियानमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको यात्रामा आएका छन्, तर एउटी अप्रत्याशित त्रासदी लियो डेमिडोभ र रायसाले बनाएका सबै चीजहरू नष्ट गर्नुहोस्।
रायन एक हो लन्डनमा आधारित आइरिश लेखकजहाँ उनले शहरमा वकिलको रूपमा धेरै वर्ष काम गरे, साथै समय-समयमा टेलिभिजन र फिल्मको लागि सहयोग गरे।
उसको थियो साहित्यिक शुरुआत यस श्रृंखलासँग मस्को आपराधिक अन्वेषण प्रभागका कप्तान अभिनीत, अलेक्सी दिमित्रेविच कोरोलेभ.
एक युवतीको निर्जीव शरीर एक विनिमय चर्चको बेदीमा देखा पर्दछ। यो केस क्याप्टन कोरोलेभलाई तोकिएको छ, जसले पीडित अमेरिकी नागरिक हो भनेर पत्ता लगाउने छ। को NKVD हस्तक्षेप गर्ने निर्णय गर्दछ र कोरोलेभको नजिकबाट छानबिन गरिन्छ। कुनै पनि गलत कदमले साइबेरियामा तपाइँको निर्वासनमा जादू गर्दछ। कोरोलेभ प्रवेश गर्नेछ अंडरवर्ल्ड मा Muscovites आफ्नो नेताहरु संग कुरा गर्न को लागी उनीहरूको वरिष्ठ बाट दबाव महसुस र तिनीहरूले कसले विश्वास गर्न सक्दछु भनेर सोच्न।
रातो घासको मैदान
पहिलो शीर्षक मा तपाइँको अनुसन्धान पछि कोरोलेभ सजाइएको छ र सबै सोभियत कार्यकर्ताहरूका लागि उदाहरण बन्नुहोस्। तर अघिल्लो केसमा उसको वास्तविक प्रदर्शन अझै सम्मिलित छ किनभने उनी फेरि साइबेरियाको निर्वासनमा पुगेका थिए। त्यसोभए एक रात कसैले उसको ढोका ढकढक्याउँछ र ऊ डराउँछ कि उनीहरूले उसलाई भेट्टाए। बरु, उसले भेट्टायो कि NKVD का कर्नल रोडिनोभ, तपाइँलाई अनुसन्धानको चार्ज लिनको लागि सोध्छ आत्महत्या संदिग्ध एक युवती को, मारिया अलेक्सान्ड्रोभना लेन्स्काइया, एक मोडेल नागरिक।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » कालो उपन्यास » डेमिडोभ र कोरोलेभ, रूसी अन्वेषकहरू टोम रब स्मिथ र विलियम र्यान।
म धेरै समयदेखि pdf El Niño 44 मा छु, तर मैले यसलाई हल्का रूपमा लिएको छैन। मलाई थाहा छैन, हुन सक्छ मैले यो पढें
Natxo लाई जवाफ दिनुहोस्
यो राम्रो छ। म तपाईंलाई यो सिफारिश गर्दछु।
फेडरिको गार्सिया लोर्का द्वारा "La casa de Bernarda Alba" कामको संक्षिप्त सार
Books पुस्तकहरू पढ्न जब तपाई एक्लो महसुस गर्नुहुन्छ